Nankalazaina tamin’ny faran’ny herinandro tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy izany ary nandraisana vahiny miisa 200. Niitatra ny fandaharan’asa ka lasa hiarahana amin’ny minisiteran’ny fanabeazana ankoatra ny fiaraha-miasa amin’ny liseam-panjakana Gallieni sy Jules Ferry. Mahakasika ny vokatra dia tanora 2 amin’izao no miasa eo anivon’ny orinasa DHL ary mihoatra ny 5000 ireo tanora nizatra asa. Mbola tanjona apetraka ny hahafahan’izy ireo hiditra amin’ny sehatry ny asa atsy ho atsy. Nisy ihany koa ny fanolorana loka tamin’ny fifaninanana tetikasa tsara indrindra. Ny tetikasa “Bon Miel” izay nataon’ireo tanora ao amin’ny SOS Villages d’enfants Toamasina no nahazo ny voalohany tamin’izany.